Miguel de Icaza: maharikoriko anao | Avy amin'ny Linux
Miguel de Icaza: maharikoriko anao
Mampahafantatra anao aho alohan'ny hamakianao: Ity dia lahatsoratra iray izay hanehoako ny hevitro manokana. Raha misy olona mankafy na miaro ny hevitry ny Miguel de Icaza ary mety ho tafintohina amin'ny manaraka ianao dia manoro hevitra aho ny hijery ny sisiny.
Hatrany am-piandohana, amin'izao fotoana izao dia tsy haiko hoe maninona aho no manoratra an'ity lahatsoratra ity, indrindra raha ny zavatra eritreretiko momba an'io toetra io dia navelako ho hita taratra ao ity hafa. Miguel de Icaza tsy mila fampidirana, angamba ny fantany lehibe indrindra dia ny iray amin'ireo mpanorina ny Tetikasa GNOME, tetikasa iray izay toa namafa ny fahatsiarovany azy sy izay rehetra nasehony tamin'ny filozofia.
Izay nofidian'ilay bandy OS X Efa fantatray izany, saingy mila manana endrika henjana be ianao hitsikerana zavatra iray izay izy koa no efa nandray anjara.
Araka ny nolazainy tamintsika ny bilaoginy, naka Mac iray andro handeha hamonjy fialan-tsasatra any Brezila ary niasa ny zava-drehetra, azoko atao ny mampiato sy mamerina amin'ny laoniny ny solosaina finday tsy misy olana, mandeha foana koa ny audio ary koa ny Wifi, tsy mila mamerina ny kernel izy hanamboarana ny "itsy na itsy", tsy nanana olana tamin'ireo mpamily horonantsary izy, ary tsy nanana mariky ny faharetana mampiahiahy noho ny nataony tamin'ny Thinkpad-ny.
Ary farany, tonga amintsika miaraka amin'ny fialan-tsiny fa misy ny sombintsombiny amin'ny Linux ho toy ny sehatra, fizarana maro tsy mifanaraka, ary tsy fitoviana eo amin'ireo kinova amin'ilay distro iray ihany.
Tsy hiresaka amin'ny antsipiriany aho hoe maninona amin'ny OS X no mandeha na tsia ny zavatra efa noresahiko tao amin'ny lahatsoratro hafa, fa avelao aho hilaza aminao Don Icaza, fa ao amin'ny Netbook izay nananako herinandro lasa izay, ary amin'ny ny Dell Vostro izay ananako izao, raha nanana olana tamin'io karazana io aho (Tsy mbola nanana aho) ny ahy irery no omena tsiny amin'izany.
Ho an'i Miguel de Icaza dia lazaiko: ny olana dia afaka manolotra izay mampiasa fizarana Rolling Release, na manavao tsy tapaka, fa amin'ny ankapobeny GNU / Linux milamina kokoa tsy afaka. Izany no nolazaiko tamin'ny zavatra niainako, miaraka amin'ireo fitaovana izay efa nanandramako nandritra ireo 7 taona nampiasako.
Ary tompoko, tsara noho ny olona rehetra no tokony hahalala izany, raha ny OS X anao dia mifantoka amin'ny karazana fitaovana iray ihany, GNU / Linux Miezaka ny handrakotra faritra misimisy kokoa izy, ary imbetsaka mba hiasa ny fitaovana dia mila manao injeniera miverin-dalana ianao, satria araka ny fantatsika rehetra, tsy anisan'io ampihimamba io izahay toa ny Apple sy Microsoft.
Saingy tsy te-hanitatra bebe kokoa ny tenako: miasa tsara ho anao ve ny OS X? Miarahaba anao, mankafy ny Macbook na izay anananao, izay eo imasoko (ary na tsy manome diky aza izy) tsy iza fa ny mpamadika mpihatsaravelatsihy. Ianao dia iray tamin'ireo nanomboka avy ambany, niady antony ary niafara tamin'ny lafiny mifanohitra. Ankafizo ny lafiny maizinao, miaraka amiko ny hery 😛
Amin'ny fahatsorana, Miguel de Icaza maharikoriko anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Miguel de Icaza: maharikoriko anao
Malalaka ny tsirairay hisafidy ny OS tadiaviny hananana na tsia, ny tena lesoka nananan'izy ireo dia nilaza fa tsy mandeha amin'ny birao ny linux, "Tsy handeha ho azy io", satria maro amintsika no mampihatra izany, izaho aza jereo fa misy programa amin'ny java ahy amin'ny fampiharana fangatahana faktiora noho ny zava-misy tsotra hoe novadiko ho an'i Debian Stable ireo masinina ary tsy azoko izay fampiharana faktiora izay mety amiko, fa ho an'ireo ambin'ireo fangatahana kosa ny sekretera, ary ny tovolahy sisa dia tafita lavorary.
Ity fanontaniana ity dia ho an'ny rehetra: Namaky ny lahatsoratra bilaogy Icaza ve ianao?
Satria ny zavatra lazainy dia "Amiko, ny fanaparitahana ny Linux ho sehatra iray, ireo disro tsy mifanaraka marobe, ary ireo tsy fitoviana manerana ny kinova distro iray ihany dia ny Nosy Mile / Chernobyl ahy."
Tsy nilaza mihitsy izy hoe tsy mandeha izany, ary raha misy mandika an'izany, dia tokony ho hitan'izy ireo mazava fa nilaza izy hoe "Ho ahy."
Eny, ny andalana farany dia milaza fa "Linux tsy nahavita niampita ny hantsana birao.", Izay amin'ny teny espaniola dia "Linux tsy nahavita niampita ny hantsana birao"; ary ny antony, lojika tanteraka, napetrany tamin'ny fehezanteny voalohany notanisiko. Izy io dia maneho ny olana tsy maintsy nandraketan'i Linux ny tsenan'ny birao, ary tsy izany no heviny, statistika izy io: Firy amin'ny tsenan'ny fitaovana finday no rakotra Android (vakio ny "Linux")? o Firy amin'ny tsenan'ny solosaina finday (izay tsy mila tontolon'ny birao mihitsy) no rakotra Linux? o Ohatrinona amin'ny tsenan'ny mpizara no rakotra Linux? o Ohatrinona ny tsenan'ny kojakoja an-trano sy ny fitaovana hafa toy ny router / wifi fidirana no mandrakotra azy? Ho an'ireo fanontaniana rehetra etsy ambony: somary kely fotsiny. Fa firy amin'ny tsenan'ny birao no rakotra Linux? Pittance ary porofo izany fa tsy afaka niampita ny "lavaka mangitsokin'ny birao izy."
Azonao ve aho? 😉
Raha ny marina, inona ny antontan'isa atokisanao? Tsy afaka hampiasa GNU / Linux 1% fotsiny ny mpampiasa solosaina, sendra ny mpampiasa GNU / Linux aho na dia amin'ny micros….
Fantatrao fotsiny fa manohana ny zava-drehetra ny taratasy, indrindra amin'ny statistika,
Raha ny moron aza izay mampiseho fa tsara kokoa ny antivirus ataon'izy ireo, dia ampiasain'izy ireo ny fisedrana mba hahamarina izany.
Ary farany, ny windows dia sarotra toa ny GNU / Linux ampiasaina, ny tiana holazaina dia hoe efa apetraka mialoha ao amin'ny masinina izy io, ary misy foana ny olona mahalala fomba "hamahana" ny olan'ny windows ary manampy ny mpampiasa azy.
Ny olana dia iray amin'ny fanaparitahana fotsiny, noho ny herin'ny tsena,
M $ dia mametraka takelaka sy lakaoly foana ao amin'io faritra io, eny fa na dia any an-tsekoly aza dia misy porofo maro an'izany.
Ka ny GNU / Linux tsy mandresy eo amin'ny birao satria tsy ampy ny fahamendrehana dia FALLACY feno.
Wikimedia (tsia, tsia… Wikipedia no, Wikimedia - laharana fahatelo amin'ny latabatra): http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems#Web_clients
(referansy haingana, fa afaka mitady ianao na aiza na aiza)
Ny loharanom-statistika rehetra dia manondro zavatra iray ihany: Linux latsaky ny 2% amin'ny tsenan'ny birao (ary mitombo miadana izy, nefa maniry).
Betsaka ny lafin-javatra, tsy ny tsy fahampian'ny marketing fotsiny (izay misy ny sasany amin'izany amin'ny orinasa maro).
ajanony ny fiarovana an'i Icaza, amin'ny tena Linux dia manao toy izany koa ianao ...
Azonao atao ny manao izay tianao, ary tsy miaro an'i Icaza ianao, miaro fananganana iray ianao, fanambarana iray ary izany dia ny Linux tsy mbola namakivaky ny lavaka mangitsokitsoka, ary olona maditra, jamba, na msx fotsiny no hiteny amin'ny fomba hafa.
Na dia mety ho lehibe kokoa noho ny 1% aza izy io, dia tsy misy akaikin'ny ampahefatry ny anjaran'i Windows izany. Mahamenatra nefa izy no izy.
+1 .. ..n'ny lasibatra eo afovoany..x2 .. 😀
Miaraka amintsika ny hery.
haha .. Vao avy naneho hevitra momba ny lahatsoratra KDE momba an'io aho ..
Efa nilaza aho fa misy zavatra toa izany tsy afa-mandositra azy ireo ...
Manaiky tanteraka anao Elav. Mora ho an'ny rehetra ny miasa tanteraka raha tsy ny hardware fotsiny no tokony hifantohan'ny kernel anao.
Fa ny GNU / Linux koa dia mihoatra ny lafiny teknika. Misy lafiny sosialy sy fifandraisana (fiombonambe), "filozofika", raha "tianao" dia fomba iray ahitanao ny fiainana. Saingy mazava fa ny teknika fotsiny no jeren'ity lehilahy ity, izay mampiseho ny fahajambany sy ny tsy fahaizany (na angamba ny lolom-po aminy) hahatakatra sy hiaina ao amin'ny biosfera gnu / linux ...
McIcaza dia hoy izy:
PD: Tandremo fa milaza izao i Icaza fa tsy nilaza izay nolazainy ry juaz!
Mamaly an'i McIcaza
Ny orinasako Xamarin:
Azonao ve izao hoe inona izany?
XamarinWea dia hoy izy:
Efa, resaka momba ny doka mahomby ho an'ny Xamarin.iOS io, izay nolazaiko, fa nahomby, etsy ankilany, mamela ny fiteniny ny fiteniny, Meksika, henatra tanteraka.
Mamaly an'i XamarinWea
Ole sy ianao mampiasa Shit OS farafaharatsiny Icaza dia efa nandeha tamina rafitra nakatona fa DECENT tsy toy izany SHIT OS Avy amin'i MOCOSOFT
Na izany na tsy izany, ianao sy manome ohatra
↑ Ity. Na dia ho an'ny Meksikana aza dia mandeha, fa izany dia misaraka. Efa fantatray fa tsy azy ny heviny ary mandeha amin'izay alehan'ny vola izy. Amin'izany tantara izany dia tsy fantatro akory hoe maninona isika no miresaka azy. De Icaza dia toetra tsy misy ifandraisany amiko foana.
Avelao izy handeha miaraka amin'ny gidro any amin'ny faritra hafa fa tsy hump intsony.
Izany no zavatra hafa ... io ezaka io dia napetraka tamin'ny fanaovana kopia .NET, ho an'ny diky izay ...
Avelao izy hiaraka amin'i Marco hitady ny reniny miaraka amin'ny gidro
"Izaho sy ny rajako amelio" satria io gidro misy gidro io dia hiteraka sakaiza tsara x'DDD
P.S. Ho an'ny firaketana, tsy manana na inona na inona mifanohitra amin'ny endrik'ilay andian-dahatsoratra aho fa tonga ao an-tsaiko izao
Manaiky tanteraka aho, ary tsy noteneninao ianao fa nandray anjara tamin'ny sombin-javatra izy tamin'ny namoronako ny GNOME, mihoatra ny antony manosika, hajaina tamin'izany fotoana izany, saingy niova izy ireo.
Rehefa natsangana ny Gnome dia misy antony marim-pototra hanaovana izany, aza manandrana misavoritaka zavatra izao.
Ny iray hafa izay mampiasa elatra Shit OS, inona no hananana ny OS OS izay saika ampiasain'ny tsirairay?
Tsy hampiasa azy io intsony aho, vazivazy OS izany fa ny 8 inona kosa ny diky sy ny interface ratsy dia ratsy noho ny akorandriaka dia tsara lavitra noho io SHIT io
Ilay manafay azy amin'ny valinteniny dia ianao ...
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho, amin'ny fanehoan-keviny avy amin'ny Stallman's Religious Fanatic dia efa manodinkodina ny forum izy.
Ara-dalàna raha miasa tanteraka ny OSX. Inona no mety ho heloka bevava satria tsy izy izany, satria rafitra miasa ho an'izao rehetra izao tena kely fitaovana. Ho an'i Miguel de Icaza dia ho tsara izany, saingy toa fomba iray hamatorana ny mpampiasa tsy amin'ny rindrambaiko izay hampiasanao fotsiny, fa koa amin'ny fitaovana, tsy misy be dia be. Ary imbetsaka miaraka amin'ny tombony ambany noho ny vidiny.
Ny kernel Linux, etsy ankilany, dia miasa na dia amin'ny fitaovana ao an-trano aza ary manarona spektrum lehibe toy izany, ny fahitana ilay bibikely hafahafa dia tsy hafahafa. Na dia tsotra aza androany sy amin'ny zavatra niainako manokana, miaraka amin'ny solosaina vaovao bebe kokoa na kely aza ny ankamaroan'ny fametrahana izay nataoko dia nanohana, tsy mila manamboatra na inona na inona, ny zavatra rehetra ilaiko. Tahaka ny Windows, ny fahasamihafana fotsiny dia tsy voatery nametraka CD misy mpamily ao anaty solosaina aho, satria maro amin'izy ireo no tafiditra ao am-pon'ny rafitra.
Ny fanontaniana dia ho tsotra toy ny mpanamboatra fitaovana mamoaka ny mpamily azy, mandray anjara amin'ny fampandrosoana ireo efa misy, na manamboatra azy manokana araka ny tokony ho izy.
Araka ny nolazaiko, tsy misy zavatra mahagaga na lehibe amin'ny zavatra natao manokana ho an'ny fitaovana iray fa tsy miteraka olana. Raha nanome azy ireo izany dia ny famonoana ireo izay mivarotra an'io vokatra io.
Aleksandr dia hoy izy:
* Gridia kesika sy fitaovana mandeha amin'ny solika
Valiny tamin'i Aleksandr
amin'ny milina fanasan-damba, fahitalavitra, telefaona finday, fandrahoana sakafo, microwave, ary nahita detergent Linux mihitsy aza aho. 🙂
Fahadisoana, tsy mandeha lafatra izy io. Ao amin'ny biraoko dia 10 izahay, 8 manana mac. Fantatrao ve ny fotoana andrenesako ireo mpivaro-tena momba ny fianjerana na zavatra hafahafa !?
Ilay mampiasa azy hivezivezena ary tsy misy afa tsy miharihary fa tsy manana olana izy, ilay mampiasa azy hiasa ao dia hitanao ny fomba fiasan'izy ...
Ho ahy, izay lazain'ny mpivarotra dia diky amiko.
Tsy mampiasa Mono aho (ary tsy nijery ireo antontan-taratasy momba ny Python) na i Gnome (afa-tsy ny fampiharana roa)
Araka ny nolazain'i Linus, Fuck you Icaza
Lahatsoratra fanatika iray hafa.
Raha tena hevitry ny tena izy fa tsy fanambarana dia hoy aho hoe "Miguel de Icaza: maharikoriko ahy ianao."
Tao amin'ny MuyLinux dia saika nitovy tamin'ny teto izy ireo ary namaly i Miguel De Icaza (amin'ny fomba toa tsy dia marina loatra amiko) toa izao: https://gist.github.com/migueldeicaza/e2985387a4f0006c99d6
Ity toerana ity dia manana herin'ny haino aman-jery iray, tsy mampatanjaka azy ny fankahalana eo amin'ny fiarahamonina.
Ny fiantsoana azy ho "mpamadika mpihatsaravelatsihy" noho ny fanapaha-kevitra hampiasa OSX ho toy ny rafi-piasan'ny birao dia toa zaza loatra amiko, indrindra raha avy amin'ny olona iray izay tsy nanome na inona na inona ho an'ny Free Software raha oharina amin'i Miguel De Icaza, miresaka momba ny tetikasa, kaody ary tatitra. / fanidiana ny bibikely. (Ny fakana vola amin'ny famoahana atiny mifandraika amin'ilay lohahevitra dia tsy nesorina, fa ny fanehoan-kevitra tsy mitombina no jerena ambany)
Ny sakana lehibe indrindra tokony hanohizan'ny vondron'olona Free Software dia ny vondron'ireo mpankafy izay mankahala fatratra ny famoahana fanambarana feno fientanam-po nefa tsy misy adihevitra mirindra.
Fanentanana bebe kokoa, fahendrena bebe kokoa ary fitiavana bebe kokoa, azafady.
Ny zavatra voalohany tsikaritro dia hoe, raha tsy nifanaraka tamiko izy ireo dia tsy tokony hamaky. 😉
Nahagaga ahy ilay navoakan'i Icaza tao amin'ny MuyLinux, saingy zony tsara izany. Heveriny fa adala i MuyLinux satria heveriko fa mpamadika fihatsarambelatsihy izy, ary tsy noho ny fampiasana OS X, fa noho ny fanafihana ny GNU / Linux sy ny "fanaparitahana azy" amin'izany fomba izany. Na izany aza, inona no antsoinao fa mandray anjara amin'ny GNU / Linux? Fandroahana tsipika kaody? Satria azoko lazaina aminao fa raha izany no foto-kevitry ny "fandraisana anjara" dia diso ianao. Tsy ny rehetra no miady amin'ny adiny amin'ny fomba mitovy.
Antsoy aho mpankafy raha tianao dia tsy liana aho fa mbola mieritreritra an'izany ihany momba an'i Icaza ..
Hoy aho, ary nanonona aho: "Tsy manafoana ny trosa amin'ny famoahana atiny momba io resaka io, fa ny fanehoan-kevitra tsy mitombina kosa dia jerena ratsy." 🙂
Nosy dia hoy izy:
Lohahevitra, taiza no nahazoanao an'io avatar io?
Valio ny fanontaniana iray
JuanH dia hoy izy:
Mikasika ny fanaparitahana dia mbola tsy azoko ihany ny tsy fahazoan'ny olona (ary indrindra ny olona toa an'i Icaza) fa ny "non-fragmentation" dia tsy mifanaraka tanteraka amin'ny dikan'ny OpenSource / Free Software. Raha misy mieritreritra fa ny rindrambaiko efa misy dia tsy mahafeno ny filany na mino fa mahavita tsara kokoa izy ireo, ahoana no hanaisotra ny "fahalalahana" an'io olona io tsy handeha amin'ny làlan-kalehany? Teraka sy nizarazara noho ny antony iray ny GNOME. Hino ve Icaza fa izy irery no manana antony marim-pototra amin'ny fakana lalana ankoatry ny efa misy?
Sombin-javatra amin'izany rehetra izany, ankoatry ny mahasalama (safidy maro azo isafidianana, safidy maro manome fahafaham-po ny filàna samihafa), dia tsy azo ihodivirana ao anaty rindrambaiko maimaimpoana.
Avy eo ao anatin'ny safidy rehetra, ireo mpampiasa dia ireo izay misafidy sy mamaritra hoe iza ireo tetik'asa izay velona.
Valio amin'i JuanH
Amen dia hoy izy:
Mamaly an'i Amen
Mikasika ny fanaparitahana dia mbola tsy azoko ihany hoe ahoana no tsy fahazoan'ny olona (ary indrindra ny olona toa an'i De Icaza) fa ny "non-fragmentation" dia tsy mifanaraka tanteraka amin'ny dikan'ny OpenSource / Free Software. Raha misy mieritreritra fa ny rindrambaiko efa misy dia tsy mahafeno ny filany na mino fa mahavita zavatra tsara kokoa, ahoana no hanaisotra ny "fahalalahana" an'io olona io tsy handeha amin'ny làlan-kalehany? Teraka sy nizarazara noho ny antony iray ny GNOME. Hino ve Icaza fa izy irery no manana antony marim-pototra amin'ny fakana lalana ankoatry ny efa misy?
Avy eo ao anatin'ny safidy rehetra, ireo mpampiasa no misafidy sy mamaritra izay tetikasa ho tafavoaka velona.
Miala tsiny amin'ny hevitra roa sosona. Nalefako ho "JuanH" aloha fa tsy navoaka. Noheveriko fa satria rehefa naneho hevitra voalohany tamin'ny solon'anarana mahatsikaiky "McIcaza" dia nalain'ny tranokala ny IP-ko ary izany no antony tsy namelany nick hafa. Afaka mamafa ny admin ny iray amin'ireo hevitra, na ireo izay tadiaviny mazava ho azy :) p
Ny valinteninao dia ny elavin'ny zaza "Ny zavatra voalohany tsikaritro dia raha tsy nitovy hevitra tamiko izy ireo dia aza mamaky." Raisina am-pitandremana ny bilaogy, izay raha ny fahitako azy dia tena tsara.
Etsy ankilany ... «Saingy, inona no tianao holazaina amin'ny fandraisana anjara amin'ny GNU / Linux? Fandroahana tsipika kaody? Satria afaka milaza aminao aho fa raha izany no fiheverana ny "fandraisana anjara" dia diso ianao. »… WTF Heveriko fa miompana amin'ny hadalana ity valiny ity, ny tetikasa GNOME sy MONO no zava-dehibe indrindra amin'ny tetik'asa GNU. Ary jereo, heveriko ihany koa fa adala i Miguel de Icaza hatramin'ny naha-mpiara-dia tamin'ny fizarana "Open Source" an'i Microsoft.
Aza mametraka am-pahatezerana, izay mamoaka lahatsoratra tsy dia tsara kalitao tahaka ity ...
Hanombohana azy, ny GNOME sy ny MONO dia tsy ny tetikasa GNU manan-danja indrindra ary na dia nisy aza izany, dia tsy mampihena ny anjara birikin'i Elav sy ny orinasa ao amin'ny Desdelinux.
Etsy ankilany, ahoana ny hevitrao fa i Elav, Picajoso na i Pablo, izay mpanoratra manandanja eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Free Software, dia nanomboka nanoratra fa fako ny Linux satria tsy noraharahian'i Linus izy ireo hanova an'ity na ity zavatra ity ary samy hafa izy ireo hampiasa Mac satria miasa tsara kokoa ny MS Office ao. Izay farafaharatsiny ho toetra fihatsarambelatsihy sy mifanohitra. Satria rehefa tafiditra amin'ny Free Software ianao dia manolo-tena amin'ny lafiny iray hanohanana ny fivoarany ho fankasitrahana ny zavatra rehetra nomen'ny fiarahamonina anao.
Mamadika vondrom-piarahamonina iray i Miguel de Icaza ary noho izany dia mila miaritra ny fandavana azy izy ireo. Tsy hoe inona no hampiasaina na tsia. Ireo no olona nihevitra azy ho idealy, izay nivarotako tamin'ny mpandraharaha avo indrindra.
TANDREMO fa tsy nilaza aho hoe izy ireo no zava-dehibe indrindra, fa "ny tetikasa GNOME sy MONO no zava-dehibe indrindra amin'ny tetik'asa GNU" semantika!
Izay farafaharatsiny mba toetra fihatsarambelatsihy sy mifanohitra. Satria rehefa tafiditra amin'ny Free Software ianao dia manolo-tena amin'ny lafiny kely hanohanana ny fivoarany ho fankasitrahana ny zavatra rehetra nomen'ny fiarahamonina anao. "
Manaiky tanteraka, saingy mila manavaka ny fotokevitra amin'ny hevitra azo ampiharina ihany koa ianao, amin'ny solosainako rehetra (manana 3) aho nametraka linux, ao amin'ny mpizara natokana sy amin'ny vps manokana ihany koa, fa amin'ny asako dia mila mampiasa Mac aho OS X ho an'ny compiler ho an'ny iOS ary ampiasaiko saika tontolo andro io, tsy tsapako fa mamadika rindrambaiko maimaimpoana aho.
Izaho koa tsy miaro an'i Miguel, ny mifanohitra amin'izay no ela, mieritreritra aho fa tsy nahatsiaro tena! ny hany zavatra resahiko dia ity lahatsoratra ity fa tsy dia kendrena loatra!
Ny valin-teninao dia elav zazakely, "Ny zavatra voalohany tsikaritro dia hoe, raha tsy nifanaraka tamiko izy ireo dia tsy tokony hamaky." Raisina am-pitandremana ny bilaogy, izay raha ny fahitako azy dia tena tsara.
Ankizy ve ny valinteniko? Fanontaniana fankasitrahana. Tsy hahavery ny maha-zava-dehibe ny bilaogy ny hevitra na lahatsoratra momba ny hevitra azoko atao.
Etsy ankilany ... “Na izany aza, inona no antsoinao fa mandray anjara amin'ny GNU / Linux? Fandroahana tsipika kaody? Satria azoko lazaina aminao fa raha izany ny foto-kevitry ny "fandraisana anjara" dia diso ianao. "... WTF Heveriko fa ny valiny dia tsy mitombina, ny tetikasa GNOME sy MONO no zava-dehibe indrindra amin'ny tetikasa GNU. Ary jereo, mino koa aho fa adala i Miguel de Icaza hatramin'ny naha-mpiara-dia tamin'ny fizarana "Open Source" an'i Microsoft.
Tsy nisy fotoana nolazaiko hoe tsy zava-dehibe ny MONO na ny GNOME. Tsotra fotsiny no ilazako fa maro no mieritreritra fa ny fandraisana anjara amin'ny GNU / Linux dia amin'ny alàlan'ny fandaharana ihany no ahazoana izany ary tsy marina izany. Betsaka ny fomba azonao andraisana anjara amin'ny OpenSource nefa tsy mila manoratra tsipika kaody.
Tsy namoaka tamim-pahatezerana aho, saingy indraindray ny sasany manadino fa ny bilaogy dia momba .. 😉
Manohana ny zavatra nasehoo aho.
Tsy azoko hoe maninona no manome vaovao mampiseho fankahalana be ry zareo.
Ary hoy aho hoe, tsy afaka miala na hanao izay tiany ve i Miguel de Icaza?
Mahagaga ahy ireo izay miaro ny fahalalahana mandany ny fotoanany hamerana ny an'ny hafa.
Hevitra manokana izany, samy mieritreritra izay tiany hoeritreretina ny tsirairay, nanasongadina izany i elav talohan'ny nanombohany ny lahatsoratra.
Wow. Raha ny fahitako azy, raha misy fanatisme na fombam-pivavahana haha.
"Raha tianao ny loharano misokatra, dia tsy mendrika izany ianao."
Ahoana raha Linus sy mpandraharaha hafa, manomboka amin'ny fotoana iray hafa. Ary ahoana raha fampandrosoana tsara kokoa ho an'ny Win na OSX?
Raha Linux tena tsara, mahazo aina, fa tsy tokony hiditra amin'ny fanatisme isika.
Enga anie ny hery homba antsika 🙂
... Tsy afaka nijanona tao an-tsaiko aho fa indray andro dia reraky ny fananganana ilay tovolahy ary nanana vola hividianana mac, ary nividy izy. Izaho manokana dia tsy manome sainiko raha mividy mac ny bandy ... fa mangovitra ny vavako. Satria mbola betsaka kokoa ny amintsika, ary samy manohy mandika izay ataon'ity vondrom-piarahamonina ity i Apple sy i Microsoft. Ny zavatra iray dia ny fanovana ny rafitry ny fandidiana ... ny iray hafa dia ny fanipazana fahalavoana amin'izay nisy anao satria androany dia hafa ianao.
Lahatsoratra tena tsara 🙂
Tsy mpamadika izy fa nifindra avy tany amin'ny "indie" ka "consumerist", izay halan'ny ankamaroan'ny fiarahamonina "Libre Soft". Mankafy ny masiniko amin'ny Linux X Distro aho ary mampiasa iMac any am-piasana ary milaza fa ny zavatra rehetra dia miasa tanteraka amin'ny OSX dia hadisoana, tsy fantatro izay dikan'ny OSX izay tsy mandany ny loharano havia sy havanana, isaky ny manana aho. «mamolavola azy» satria lasa niadana. Tsy misy fitambaran'ny OS sy ny Hardware dia tonga lafatra 100% ary izay milaza azy dia miaina amin'ny fandavana tanteraka.
Hatraiza ny fankahalana sy fanatisme
Apple dia nividy an'i Icaza taloha ela be .. Ny asa tokony ho nataony mba hahasosotra an'i Gnome dia efa natao tamin'i Gnome 3. Soa fa tsy nalaim-panahy i Linus Torvalds taloha ...
Fanamarihana: Tsy niasa tao amin'ny Gnome efa ela i Miguel de Icaza ary tsy nisy ifandraisany amin'ny fivoaran'ny Gnome 3
Marina !! Izany Gnome izay anarahantsika ny maro amin'ny fitiavana izany dia noho io lehilahy io, ny zavatra rehetra momba ny Gnome 3 dia tsy misy ifandraisany aminy, na amin'ny fandrosoana na amin'ny fampandrosoana.
Ao amin'ny birao an-tranoko dia manana Arch miaraka amin'ny Gnome 3.6 sy Gnome Shell aho.
Ao amin'ny solosainako mampiasa Openbox miaraka amin'i LXDE (Lubuntu) aho.
Nandalo saika ny tontolo iainana rehetra aho nanomboka tamin'ny KDE ka hatrany amin'ny Awesome.
Gnome 3 miaraka amin'ny GTK3 sy Gnome Shell no zavatra tsara indrindra nitranga tamin'i Gnome (sy GNU / Linux amin'ny ankapobeny) nandritra ny fotoana ela. Manana antony hitenenako izany aho.
Tsotra ny traikefan'ny mpampiasa, mahasarika ny maso ary mahomby ary ambany ny vidin'ny fitaovana, zavatra tsy atolotry ny KDE, Unity, ary ny tontolon'ny birao hafa.
Tsy azoko ny fankahalana an'i Gnome3 (+ Gnome Shell) sy ny safidin'ny Unity na KDE an'ny sasany raha ny tontolon'ny birao feno no resahina. Ireo mpankafy dia efa mialoha ny hankahala izay indray mipi-maso tsy mety aminy mihitsy raha tsy manadihady tsara ny panorama iray manontolo, ary ny zavatra manenina ahy dia ny hoe ny fankahalana dia somary mampiadana ny fivelaran'ny tetikasa Free Software. Midera ny tenany izy ireo satria mpiaro ny filozofia saingy mampatahotra lehilahy iray namorona sy nitazona ny sasany amin'ireo tetikasa lehibe indrindra izy ireo ary kely kokoa ary, ny mbola ratsy kokoa aza, dia nampitahorin'izy ireo ireo tetikasa ireo tamin'ny filazany fa mihemotra na tsy misy ilana azy.
Ny tena mpiaro ny filozofia dia mandray anjara, tsy manaratsy.
Manaja ny hevitrao aho .. Mametraha fanontaniana aminao aho, mandra-pahoviana no tsy nampiasa KDE? Maninona no milaza fa ny Gnome Shell dia manana vidin'ny fitaovana kely kokoa noho ny KDE, satria tsy mino aho ... Raiso ny fitsapana hahitanao.
ny fahombiazana sy ny fanjifana kde dia tsara fa amin'ny fametrahana fototra tsy misy effets, fa amin'ny fametrahana feno dia mametraka anao amin'ny pc medium-resource toa ny sokatra. tsy toy ny Gnome 3 izay manana tahan'ny fahombiazana sy fanjifana tsara amin'ny PC tsy maoderina. ratsy fa na eo aza ny maro ny gnome dia mbola io no desktop linux tsara indrindra 😎
Nametraka tao amin'ny Debian KDE 4.8 aho ary nampiasa ny kde-feno meta-fonosana, ary mbola tsara ny fampisehoana. Azafady, amin'ny fototra inona no ilazanao fa Gnome no tontolo iainana Desktop GNU / Linux tsara indrindra? Satria lazainao amiko fa ho anao Gnome no tsara indrindra eran'izao tontolo izao ok, fa andao, raha tianao afaka manomboka mampitaha azy roa isika ka mahita ny vokany.
@elav dia fitaovana tsara ho an'ny lahatsoratra izany. ampitahao ny fametrahana gnome3 sy ny kde4.8 +1
Avelao aho hifanohitra aminao fa mampiasa ny KDE 4.10 amin'ny netbook misy atoma N470 @ 1,83 Ghz aho, misy effets amin'ny birao miasa sy akonadi, ary mazava ho azy fa mandany RAM be dia be izy io, saingy mandeha tsara tokoa, izay miaraka amin'i Gnome Shell tsy vitako mihitsy. Ny hoe tianao ny tontolo iainana dia hajaiko izy io (na dia tsy mizara azy aza aho) fa nilaza ianao fa manana tahan'ny fanjifana tsaratsara kokoa (misalasala aho fa mahomby ary betsaka,
Manaiky tanteraka, toa ianao no tena hendry tamin'ny fanehoankevitra fanatisma be loatra.
Miguel de Icaza dia miteny amin'ny fomba fijeriny amin'ny maha developer sy ho an'ny tontolon'ny fampandrosoana ary miombon-kevitra amin'ny heviny koa aho na dia tsy mampiasa Apple aza izy.
Tsy tadidiko tsara, fa raha vao namaky aho fa notolorana toerana tao amin'ny Microsoft izy na niasa tany izy, tsy maninona ny tranga fa toa mpihatsaravelatsihy foana ity lehilahy ity ary amidy, noho izany tsy maninona izay mety hoeritreretiny momba ny Gnu / linux.
Linux dia fahalalahana, ary ny fahalalahana dia mila hajaina amin'ny lafiny rehetra.
Tokony hanaja ny fahalalahan'ireo izay mampiasa Linux isika ary koa ireo izay nijanona tsy nampiasa azy intsony ary na ireo izay miteny ratsy ny Linux aza.
Ny fototr'ilay lahatsoratra dia somary voafetra sy tsotra ihany fa misy ny fahamarinana sasany, indrindra ny momba ny tsy fifanarahana rehefa te hametraka programa maoderina amin'ny rafitra linux taloha. Amin'ity lohahevitra ity izay rehetra mampiasa fonosana voaomana dia mahalala izay tiako holazaina.
Betsaka ny olana amin'ny Linux ary raha ny lahatsoratra Icaza no mametraka ny akanjo amin'ny masoandro sy manatsara ny zavatra, dia ho tsara be ho an'ny rehetra izany.
Tsy tokony ho tezitra amin'i Icaza ihany koa isika satria nifindra ho mac satria izy io no rafitra fiasa tsara indrindra, taona vitsivitsy hatramin'ny windows ary na ny linux aza.
Miankina amin'ny tianao holazaina amin'ny hoe "tsaratsara kokoa", satria amin'ny filaminana dia moka izy, aoriana kely indrindra amin'ny $ windows
Ny filazana fa Mac, OS izay miasa "tsara" amin'ny ankapobeny (aleo tsy lazaina hoe mampino) amin'ny fitaovana manokana dia taona vitsivitsy miala amin'ny Windows ary Linux dia tena lainga. Mazava ihany koa fa ny programa maoderina dia tsy hiasa bebe kokoa amin'ny rafitra taloha kokoa, ny mifanohitra amin'izay no izy, sa efa nahita rindrambaiko natao ho an'ny Windows 7/8 izay miasa amin'ny Windows 98 ianao? Ny atao hoe heloka bevava dia ny an'ny Mac, ilay rindranasa miasa amin'ny kinova Mac OS X rehefa manavao ny OS dia tsy mandeha imbetsaka intsony (ny rafitra fiasanareo amin'ny Hardware-nao manokana), mampihomehy izany!
Amin'ny lohahevitry ny fitaovana manokana dia marina izany, saingy tsy dia be loatra ankehitriny, aza adino fa ny processeur an'ny mac dia intel, (ny mpanonta ahy dia hp) birao) efa an-taonany maro, tsy azo iadian-kevitra izany ary na iza na iza mampiasa fantatr'i mac io. fa misy ny fahasamihafana ifotony dia tsy maimaim-poana toy ny linux.
Mikasika ny resaka filaminana, ny mac dia tsy azo antoka toy ny linux, ny hany mampiavaka azy dia ny fizarana tsena, noho izany dia manintona kokoa ny manao malware ho an'ny mac noho ny an'ny linux, ankoatry ny finoana fa olona mampiasa linux dia olona iray ambany ny enti-manana ka tsy mahaliana ny mpangalatra cyber izany.
Mikasika ny olan'ny fametrahana rindrambaiko maoderina amin'ny rafitra fiasa taloha, dia tsy marina izany fa tsy azo atao amin'ny mac, na koa tsy eo am-baravarankely, koa inona ity farany izay manana fifanarahana lehibe indrindra ary ndao hazava ny mandresy 98 dia tapaka ary noho izany antony izany Izany no mahatonga ny mpamorona rindrambaiko tsy hampifanaraka ny vokatra Win98 intsony.
Mety ho tsara fa amin'ny Linux raha misy developer raha manamboatra fonosana iray dia tsy mila mametraka ny kinova fiankinan-doha amin'ny programa (misy fotoana izay tsy miovaova afa-tsy andalana iray (na manitatra aho) isaky ny dikanteny iray). misy kinova nohavaozina ilay teo aloha voatahiry, hevitry ny mpampiasa fotsiny izy ireo 😀
Heveriko fa ny tontolon'ny birao Mac no tsara indrindra na mora indrindra. Heveriko fa ny biraon'ny Windows dia azo ampiasaina sy intuitive kokoa, araka ny hevitro. Amin'ny Linux dia azonao atao ihany koa ny mamela ny biraonao mitovy na tsara kokoa noho ny Mac miaraka amin'ireo sary masina sy ny dock-ny, saingy tsy manamora kokoa, haingana kokoa, na mora ampiasaina kokoa izany.
Mikasika ny resaka fifanarahana dia mazava fa tsy hanao rindrambaiko miasa ao amin'ny Windows 7/8 izy ireo ary miasa ao amin'ny Windows 98 miaraka amin'izay, fa maninona no io hevitra io ihany no ampiasaina hanakiana ny Linux? Satria ny rindrambaiko natao ho an'ny kernel 3.8 dia tsy maintsy miasa ao amin'ny kernel 2.1 ohatra? Efa lany andro tahaka izany.
Ary farany, Mac dia tsy azo antoka kokoa noho Linux. Linux dia noforonina hiasa amin'ny tambajotra hatramin'ny nanombohany, ny fotony dia fiarovana, natao ho an'izany izy rehefa miasa amin'ny lozisialy lehibe, ary Mac, na dia mampiasa Unix ho toy ny fotony aza izy, dia tsy manana fepetra fiarovana amin'izany, tsy lazaina intsony. Tsy mbola niahiahy mihitsy izy ireo nanao izay hampilamina azy io. Izany rehetra izany dia ankoatry ny fizarana tsena resahinao, raha jerena fa mpizara Linux an-tapitrisany no iharan'ny fanafihana saika isan'andro.
Tsy maninona ny misafidy, fa raha milaza izy fa tsy nahomby tamin'ny birao Linux, dia manana hadisoana LEHATRA amin'izany izy
Tsy azonao omena olona iray ny fizotran'ny tetikasa lehibe toy izany. Ny filazana fa Icaza dia "tena omena tsiny" amin'ny zavatra mitranga fa tsy misy dikany raha nandritra ny tantaran'ny Linux olona an-tapitrisany sy orinasa an'arivony maro no niditra an-tsehatra tao (ankoatry ny antony ivelany).
Ny toetran'ny Free Software dia miteraka fitondran-tena tena sarotra. Ny làlana halehany dia miankina amin'ny lafin-javatra maro tsy azo atokana. Ary, hoy ny namako akaiky iray, "Ny rindrambaiko maimaim-poana dia toy ny siansa: na inona na inona eritreritrao momba azy dia mandeha."
Diso ny milaza fa tsy nahomby tamin'ny birao ny GNU / Linux… amin'izao fotoana izao dia betsaka ny tsenan'ny GNU / Liux toy ny an'ny Mac OS X
Niteraka resabe hatrany i Miguel de Icaza. Tsy niely ny Linux rehefa nivoaka i Gnome ary mety vitsy ny olona mahalala ny zava-nitranga rehefa nivoaka izy io. Adin'ny Desktop tena izy io. Na ireo fizarana aza dia nifanila, ny sasany nisafidy ny KDE ary ny hafa ho an'i Gnome.
Tetikasa vao haingana kokoa ny mono ary tsy mila firy. Resabe iray hafa.
Ankehitriny, ny tsy azontsika lavina dia ny rindrambaiko maimaimpoana izay rehetra nataon'i Miguel. Ary ny mono sy monoDevelop dia manohy mamoaka kinova misokatra misokatra.
Fantatro ny filozofia misy rindrambaiko maimaimpoana, fa ny sasany amin'ireo orinasa iasako dia tsy. Ireo orinasa ireo dia mihombo ny filokana amin'ny .NET (m $ mamindra ny zava-drehetra). Misaotra an'i monoDevelop nahavita namorona rindrambaiko vitsivitsy tao amin'ny .NET, izay nanirahana ahy hanao, avy amin'ny Linux sy izay manana rindrambaiko OpenSource.
Raha fintinina dia manaja ny hevitry ny mpanoratra aho, manoratra azy io saika amin'ny zava-drehetra, na dia maharikoriko aza izany dia efa matanjaka be XD, saingy tiako ny milaza fa na dia mampiady hevitra sy somary boribory kely aza dia nanampy betsaka tamin'ny Free Software i Miguel.
Raha ny fiheverako ny fanetren-tena, i Miguel de Icaza dia troll, efa lafo, mpiavonavona ary be loatra (raha fintina).
Mampatsiahy ahy ilay andianteny avy amin'ny sarimihetsika: tsy banga ny fikafika .... izay tsy misy no mpampiasa vola ... raha omeko mac ianao ... ampiasainao ve izany?
Raha omenao ahy ny safidy eo anelanelan'ny Mac sy ny tilikambo PC mifanentana mitovy amin'ny vidiny dia misafidy ny farany aho (mahatonga ahy hisotro ny eritreritra ny momba ny kôkômbra mety ho izy).
Izaho? Mazava ho azy fa mampiasa azy aho, mametaka sombin-doka Debian izay laninao .. hahaha
Amidiko izany ary ividianako ilay sombin-kahie = P tsy misy UEFI
Mampiasa Mac i Linus ……… .tsy misy OS X.
Sasao izy, hoy aho, ary ento miaraka aminy ilay gidro. Aleo tsy miresaka momba an'io lohahevitra io, fa mandeha izy mivarotra ny tenany amin'ny mpandoa vola ambony indrindra, fa tsy hanome tsiny antsika (ny vondrom-piarahamonina) na GNU / Linux amin'ny ankapobeny ny fanapahan-keviny: indrindra rehefa izy no nandray anjara izany hadalana antsoina hoe Gnome Shell….
Buff, misokatra foana ny olona tahak'izao. Manova sosona! haha
Luis David dia hoy izy:
Tamin'ny vava no nahafaty ny trondro …… .Ramatoa Icaza efa niteny.
Valiny tamin'i Luis David
Mila misaotra an'i Icazas aho namela ahy hahita LXDE… noho ny Gnome-Shell dia nandao ny Gnome xD aho. Raha izao dia te hahazo tsara ny fiantrana amin'i Apple izy ... eo izy, hizaha raha te hividy ny Monkey i Apple izay manome olana bebe kokoa noho ny famahana azy ...
Mieritreritra aho fa teraka lava ny Gnome-shell taorian'ny nandaozan'i Icaza an'i Gnome
+1 tena marina ny anao heheheheheh… ..
Toa manandrana manintona ny saina i Icaza .Nahoana? Te ho mpampianatra gnu aho, avy eo openource, avy eo .net ary farany, Apple?… Amin'ny farany dia tsy fantatra izay hafatra tiany ampitaina. Tsy hampiasa Windows 8 ve izy? Fotoana hanariana ny linux? Mifanohitra ny famoahan'izy ireo, ny sasany izay tsy mbola herintaona akory. Tiako ny hanana tsipika mirindra kokoa, izay farafaharatsiny mitazona fihetsika mandritra ny fotoana maharitra. Raha fintinina, ilay «izay miala nefa tsy roahina ...»
Valiny tamin'i Marito
Ratsy loatra ho an'ny tompo, malahelo azy izy. Raha ny marina dia iray amin'ireo antony manosika ahy hanaraka ny lalan'ny rindrambaiko maimaimpoana izy, Meksikana izay nanomboka ny iray amin'ireo tetikasa lehibe indrindra amin'ny hetsika: GNOME.
Saingy, amin'izao fotoana izao hampiasana rindrambaiko maimaim-poana aho nanalavitra ny fanatisme, tsy mankasitraka an'i Stallman na i Linus na Icaza aho, tsara ny fahamendrehan'izy ireo ary noho izany dia nahazo ny fanajanay izy ireo, saingy tsy misy hafa. Malalaka izy ireo manao izay tadiaviny ary milaza izay tadiaviny (toa antsika rehetra) ary satria mandao ny zavatra noforoniny izy ireo dia tsy tokony hisy fiantraikany amintsika izany, mety ho tafavoaka velona ny vondrom-piarahamonina raha tsy misy amin'izy ireo. Mijanòna.
Ratsy ho an'i Icaza, fantany izay very, tsy ilaina ny manazava ny antsipirian'ny teknika izay mampiavaka ny GNU / Linux amin'ny Mac OS, fantany izy ireo ary mbola misafidy ny handao ny rindrambaiko maimaimpoana.
«Hoy aho amin'i Miguel de Icaza: Izay mampiasa fizarana Rolling Release na manavao tsy tapaka dia mety manana olana, saingy amin'ny ankapobeny, ny GNU / Linux dia tsy afaka milamina kokoa. Nolazaiko tamin'ny zavatra niainako izany, niaraka tamin'ny fitaovana nizaha toetra ahy nandritra ireo 7 taona nampiasako. »
To elav hoy aho: ñoño shouldianero tsy misy fahalalana ny tena RR, fa tsy Testing. Ny hany anton'andraikitra amin'ny olana amin'ny solosaina dia ny iray eo anelanelan'ny solosaina sy ny seza. Tsy maninona na R distro ny distro na tsia raha manana fahalalana ilaina ianao hahafantarana ny fomba hikirakira tsara ny fizarana.
Fantatro ny fahasosoran'i De Icaza manoloana ireo olana mbola misy eo amin'ny tontolon'ny GNU + Linux sy ny faniriany manokana hampiasa rafitra iray izay miasa fotsiny.
Na izany aza, adinony fa ny GNU + Linux dia mivezivezy amin'ny karazana finday misy faran'izay betsaka indrindra ary ny masinina Apple dia noforonina sy notsapaina tamin'ny vondrona mpamorona iray ihany izay nisafidy fitaovana manokana ary avy eo nanamboatra ilay rindrambaiko hiasa akaiky amin'ireo hardware voalaza ireo.
Noho izany fampitahana somary tsy rariny. Azo takarina eny, fa tsy rariny.
Amin'ny tranga manokana manokana dia efa elaela ihany aho no tsy nanana olana tamin'ny fanidiana na fanarenana ny torimaso na hibernation tao amin'ireo masiniko, solosaina finday MSI, solosaina finday HP, Intel QuadCore generic ary Intel Celeron generic izay ampiasaiko ny OS ambaratonga. , Chakra sy Ubuntu, Chakra ary Arch ho mpizara amin'ity farany.
Hahahaha .. Eny eny, mazava fa ny mpampiasa ihany no meloka, fa ny tsy fandriam-pahalemana "mety" mety hitranga amin'ny tranga sasany no tiako horesahina, rehefa manavao na manao tsy an-kijanona tsy fantatra izay ataontsika ..
Milaza aho fa manana hopping OS i Icaza fa tsy distro hopping: p
Tahaka ny nolazaiko tao Muylinux
Avelao handeha lavitra. Andao hojerentsika raha mieritreritra kely ianao ary mahatsapa ny toerana anaovanao ny hevitrao
Tamin'ny fotoana nitenenany tamin'ny anaran'ny rindrambaiko maimaimpoana
Fa izao ve izy misotro ronono mitaraina noho ny olana ara-teknika?
Ity lehilahy ity dia manamarika ny fizarazaran-tena ho zavatra ratsy, satria maniry ny hanakatonan'ny Ñu linux sy hikirakira modely fampandrosoana tsy manam-paharoa tantanan'ny olona manana fahalalana momba ny tsena afaka manipy azy eo amin'ny birao. Fa maninona? satria ny tadiaviny dia tsy ny fananan'ny olona fahafaha-miditra bebe kokoa amin'ny fahafantarana ny fomba fiasan'ilay rindrambaiko, ny zavatra iahiany dia ny lafiny Teknika amin'ny rindrambaiko malalaka. Raha fintinina:
Mpiaro ny Open Source ity lehilahy ity (mila jerentsika fotsiny ny fomba firesany momba ny LINUX fa tsy GNU / linux) izay nanapa-kevitra fa aleony ny rindrambaiko manana
Raha ny marina dia miankina aminy ny fanapahan-kevitra horaisiny amin'ny fiainany. Raha mahasambatra kokoa ny fahafahany amin'ny fahalalahana izy, tsara ho azy
Fa avelao ny fanehoan-kevitra toy ny hoe "linux tsy afaka nandroso teo amin'ny birao mihitsy" "ny fragmentation dia olana" "Sambatra aho amin'ny mac"
Izy ireo dia marketing madio ho an'ireo orinasa tompona toa an'i Microsoft sy Apple
Vonona, Ciao Miguelito, faly mihaona aminao, misaotra anao tamin'ny fanombohana GNOME, ary hanidy ny varavarana rehefa lasa ianao
Miguel de Icaza dia iray amin'ireo lehilahy nandray anjara betsaka tamin'ny rindrambaiko maimaimpoana tamin'ny andro voalohandohany, farafaharatsiny manaja izany aho. Ary koa, araka ny nambarany dia mbola mampiasa linux amin'ny mpizara azy izy. Heveriko fa be loatra ny resaka adaladala indraindray ary heveriko fa ohatra iray amin'izany ity lahatsoratra ity.
"Ny fonja rehetra dia tranomaizina"
Angamba efa nandao io fonja io i Icaza.
PS: Nampihomehy ahy ny namaky an'i Icaza niezaka ny ho adala tamin'ny rehetra ha
Marina ny anao, io "fahasarotana" na "fahasarotana" an'ny OS io dia ny vidin'ny fanamboarana mampino izay hain'ny Linux, saingy tokony ho fantany sahady, mahita izany amin'ny fomba fijerin'ny mpampiasa mahazatra izy. Saingy marina izy amin'ny zavatra iray, raha tsy nahomby tamin'ny solosaina finday i Linux dia satria tsy misy fikambanana mazava loatra amin'ny fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny sary, ny tsirairay dia samy manana ny endriny manokana amin'ny tontolo samihafa tokony hisy afa-tsy iray, vitsy. tontolon'ny sary fa tena tohana sy sariaka ho an'ny mpandrindra iraisana. Eny, izany dia mamela safidy maro tsy voafetra hisafidianana, fa amin'ny ankabeazan'ny tranga dia tsy misy olona mendrika hanatanterahana asa amin'ny ankapobeny.
Ny andraikitra ratsy laza izay tsy maintsy ataon'io olona io foana, na dia marina aza ny zavatra nasehoany, tsy vao sambany nilaozany izany rehetra izany, mba haneho ny heviny avy hatrany, ary raha tsy misy antony, heveriko fa ny mbola betsaka kokoa, averiko na dia marina aza ilay bandy. Salama.
Manaiky tanteraka !!
Tonga tamin'ny vidiny izy ireo, amidio vola aman-karena vitsivitsy ny filamatrao!
BaltazarMC dia hoy izy:
Tsy mpiaro an'i Icaza aho na toy izany, saingy heveriko fa somary nanitatra ilay lahatsoratra. Ho ahy manokana, misy zavatra hitako mivoaka amin'ny distro sasany toy ny OpenSUSE izay mila fotony hampiasana ny mpanonta na tsy afaka hibernate tsara ary tsy amin'ny fizarana hafa ihany, dia nanandrana maro nandritra ny 3 volana farafahakeliny aho nefa tsy niova ( Eny, io mania omen'ny linuxer rehetra antsika io tamintsika vao nanomboka). Ho an'ny fampiasana PC mahazatra dia aleoko zavatra mora toy ny Linux Mint, Fedora ary ny distro toy izany. Araka ny nolazainao, Linux dia mifantoka amin'ny fitaovana samihafa, na ho an'ny mpizara na ho an'ny PC ampiasaina mahazatra.
Valiny amin'ny BaltazarMC
Io lehilahy io dia manana olana amin'ny tsy fahamatorana, ary vokatr'izany, ny tsy fahampian'ny toetrany. Toa saribakoly tamin'ny zava-niseho vaovao izy, mampalahelo ...
Heveriko fa tsy mendrika andalana io, tsara ny tsy miraharaha azy.
Miarahaba anao Miguel! MAMPIASA NY FAHAFAHANA LUNIX ianao. Toa lavorary.
Ary inona no tianao holazaiko aminao, toa tonga lafatra amiko ny fandehany amin'izay tiany, satria olona afaka izy.
Mampiasa Linux, Mac ary Windows aho ary falifaly kokoa noho ny salotra, na dia ilay tiako indrindra sy arovako ho faty aza dia ny Linux, saingy tsy manakana ahy tsy hampiasa ny hafa izany.
Ny tanjon'ny lahatsoratro dia ny tsy hitsikera ny fampiasana OS X ... 😉
Raha tsy niaro an'i Icaza aho dia hitako fa liana izy ireo fa tsy "nanokana" lahatsoratra ho an'ny endri-tsoratra malaza hafa izay talanjona tamin'i Apple ary manana ny iray amin'ireo marika ireo ho masinin'izy ireo, na midina amin'ny OS, toy ny tamin'ny raharaha Linus Torvalds na i Daniel Robbins (lahatsoratra roa natokana ho an'ny farany eto, saingy ivelan'ny fanalam-baraka azy noho ireo fanapahan-kevitra ireo).
Andeha hojerentsika, averiko indray mandeha indray: Tsy resaka Icaza mampiasa OS X io, fa momba ny fenitra avo roa heny. Afaka mampiasa vokatra Apple maro araka izay itiavanao ianao (tiako ny iPods), fa tsy miaro swashbuckling zavatra iray ary avy eo manohitra rehefa tsy mety aminao intsony izao ...
Voalohany: hatramin'ny nandaozany an'i Gnome dia tsy miaro nify sy hoho intsony satria zavatra arovanao dia tsy ilaozanao. Avy eo tamin'ny fanambarany fa maty ny birao ary tokony hanaiky izany ny Linux ary handray an'io làlana io, tsy fiarovana ny nify sy ny hoho ihany koa io. Araka ny nolazain'i Icaza, raha mandinika isika, dia tsy alina io fa fandaozana izay efa natao hatry ny ela.
Faharoa: Toy ny tamin'ity karazana ity, Robbins sy Torvalds dia nanao fanakianana ny fanidiana ny orinasa izay tsy nanome fotoana hanohanana ny Linux, indrindra ny Torvalds tato ho ato, ary nivadika hampiasa vokatra (ho an'ny fiainam-piasan'izy ireo, izay tsy mitovy fialam-boly manokana toa anao) izay mampihatra ireo politika ireo dia zavatra nitovy tamin'izany ihany, ny mahasamihafa an'i Icaza dia ny tsy nanambaran'izy ireo azy (eny, Robbins eny), fa ny hetsika kosa mitovy.
Tsy momba ny GNOME ity fa momba ny hafatra tiako hampitaina sy arovako rehefa namorona azy aho.
Hatramin'ny omaly alina rehefa namaky ny vaovao tao amin'ny bilaogy hafa aho dia fantatro fa anio dia hanana zavatra mafy vakiana amin'ireo lalana ireo aho, saingy tsy dia nieritreritra firy aho, hehehe.
Azoko ny antony mahatonga ny olona maro amin'ny sehatra rehetra misafidy ny hampiasa Windows na Mac (na dia tsy tafiditra ao an-tsaiko aza satria mampifandray azy ireo amin'ny Internet), saingy tsy mifanaraka amin'ny fampahalalam-baovao ataon'ny olona aho na dia eo aza izany. an'ny fivoahana tena manokana.
Tsy ankasitrahako ny fisainan'i Icaza, kely kokoa ny fisehony, tsy tiako akory ny asany, ho ahy, efa ela ny GNOME, tsy mampiasa azy aho, tsy manome soso-kevitra azy, tsy miresaka momba izany aho. io, MONO na milaza azy aza, heveriko fa fomba fiarahana miasa ity ka hadino ireo tetikasa heveriko ho ratsy ary ireo tiako no mitombo.
Ny ambiny dia tokony hanome lanja ary hampirisika ny fankahalana, izay miteraka tany fiompiana lavorary ho an'ny troll.
Diso angamba aho, fa ny famakiana sy famerenana ny lahatsoratra dia azoko fa mieritreritra ny zavatra nolazain'i Andriamatoa Icaza i elav, tsy manome hevitra velively momba ny hoe niasa tao amin'io orinasa io izy na nampiasa OS X.
Noho izany dia mila fahatakarana famakiana isika.
Hatramin'ny namakiako ity bilaogy ity, ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra dia ny hevitr'i elav mivantana, angamba tsy dia mifanaraka tanteraka aminy aho, fa ny hevitra ankapobeny dia toa marina amiko, na ahoana na ahoana, araka ny nolazain'i elav tao amin'ny fanehoan-kevitra misimisy kokoa etsy ambony, misy fomba maro handraisana anjara amin'ny linux, ary raha ity tompoko ity dia miala, tsara fa mahomby izy, na izany aza tsy nandray anjara tamin'ny fiaraha-monina intsony izy, raha ratsy ny niresaka momba ny linux, dia tokony hiandry izy ny valiny avy amin'ity karazana ity, saingy ambonin'izany rehetra izany, tokony ho mpampiasa manome ny tsara indrindra ho an'ny rafitra fiasa izay arovantsika sy tiantsika isika, i elav dia manana ny anjarany amin'ity bilaogy ity, maro hafa miaraka amina kaody, antontan-taratasy, interface, sanganasa, sns ... tsy mila an'ity lehilahy ity isika, linux isika, isika no vondrom-piarahamonina linux.
"Izahay linux, isika no vondrom-piarahamonina linux."
Mandehana ... ary mankafy ny MacOS xD
Eny, mba haharikoriko ny fankahalana, hitako fa tafahoatra izany, manana ny heviny izy, izay hajaina ary maro amin'ireo olana nofaritany, no nasongadiny imbetsaka, amin'ny phoronix, ny linux dia mila manamboatra dingana maro hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa fa tsy hijanona fotsiny amin'ny traikefa tsy misy dikany, toy ny windows.
Mahay, mahafehy tsotra izao, ny fanoratanao ho an'i Miguel, tena tsara, ary izaho, toa ny maro hafa, dia mbola miaraka aminao amin'ny herin'ny Fahafahana! ho ela velona ny GNU / Linux!
Satria mivezivezy amin'ny Internet izy, mampiasa Mac Os X fotsiny i Icaza amin'ny toeram-piasana misy azy ary mbola mitazona rohy amin'ireo rafitra Linux ihany.
Ity misy vaovao kely amin'ny antsipiriany izay ahitanao bitsika iray avy amin'ny mpamorona an'i Mono 😉
PS: Araka ny nambarany, ny mpampiasa no voatendry hisafidy izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainy.
Mampiasa Windows ny mpamorona ny Gentoo ary tsy notsikerain'izy ireo izany, ankoatr'izay dia mbola mizara azy io, izay tsy Gentoo, fa Funtoo kosa.
Nanonona singa iray hafa momba ny fikarakarana ianao (ilay namorona an'i Gentoo).
Ny fomba fahitako azy, ny ankamaroantsika dia mitsikera ny tanjony amin'ny fanaparitahana GNU / Linux hanaratsiana ireo birao misy antsika. Ny tovolahy iray izay namporisika ny fanaparitahana ny birao sy ny fitaovana fampivoarana dia nilaza fa mandao ny birao GNU / Linux izy noho ny fisarahana noho ny sehatra iray. Ho tsara tarehy kokoa noho izy mangina izy.
Na i Gentoo na i Funtoo dia tsy nanantona ny GNU mihitsy, ary tsy mikasa ny hanao izany izy ireo satria tsy tanjon'izy ireo ny manavaka trano fitahirizana. Heveriko fa tsy azo kianina ny mpamorona azy satria asa fotsiny io (firy @microsoft no hitanao ao amin'ny vakin'ny kernel?). Icaza dia tsy nandray anjara tamin'ny GNU fotsiny, fa mpitondra radika amerikana latina izay nanolo-kevitra an'i Mexico handray rindrambaiko maimaimpoana ary hampihen-danja ireo mpampiasa KDE amin'ny filazàna azy ireo fa Qt dia tompony. Iza no hilaza fa ny folo taona taty aoriana dia ho amin'ny lafiny mifanohitra? Tsy mpandahatra programa tsotra izy fa olona nisolo tena rindrambaiko maimaimpoana
Diso tompoko, ny rindrambaiko novokarin'ny Gentoo foundation sy ny tetikasa Funtoo dia GPL 100% maimaim-poana ary raha ny marina dia mpisolovava amin'ny rindrambaiko maimaimpoana i Daniel Robbins.
Na izany aza, rehefa manaja ny be sy ny filan'ny mpampiasa azy izy ireo fa tsy "mametraka fahalalahana" amin'izy ireo, dia omeny ny mpampiasa farany ny fanapahan-kevitra momba izay hampiasaina sy izay tsy tokony ho izy, izany no antony tsy fananan'izy ireo trano fitahirizana misaraka satria tsy ilaina, satria isaky ny mpampiasa no manapa-kevitra ny amin'ny fomba malalaka tiany ny rafiny.
Averiko ihany: ny tsy fivadihan'ny tetik'asa Funtoo dia 100% GPL ary farafaharatsiny mba toy izany koa ny kaody novokarin'ny fondation Gentoo nandritra ny nitantanany azy, tsy fantatro izay ho toetrany anio fa tsy dia hitako loatra niova.
msx .. gentoo / funtoo dia mamokatra sy manome ny fonosana tsy voalamina ho anao hipoitra -av nvidia izay TSY maimaim-poana. Ny ilain'ny mpampiasa, ny fahabetsahana sns ... dia ny fitsaranao manokana sy ny fanondroanao tena. Farafaharatsiny mba miresaka momba ny pragmatism i Gentoo, izay no antony ampidirana ireo fonosana ireo. Eto ny referansa http://www.gnu.org/distros/common-distros.html
Ary raha sanatria, eto Gentoo mihitsy no manazava fa misy fonosana manana fahazoan-dàlana tsy mifanaraka amin'ny GPL http://wiki.gentoo.org/wiki/License_Groups Taiza no nahitanao ny "GPL 100% maimaimpoana"? Ny fananana fahazoan-dàlana GPL dia tsy manome antoka fa ny tetikasa amin'ny ankapobeny dia 100% satria ny fahazoan-dàlana dia manome antoka fa azo hamenoana ireo fahazoan-dàlana hafa. Holazaiko fa akaiky kokoa ny loharanom-baovao izy ireo, farafaharatsiny mba ampiantranoina ao amin'ny Osuosl ny gentoo ary hoy i Funtoo mazava tsara hoe Opensource http://www.funtoo.org/wiki/Welcome
Daniel Robbins dia nifanandrina tamin'ny mpamorona Gentoo hafa saingy tsy misy ifandraisany amin'i Andriamatoa Monkey izany.
Tsy misy dikany ny fampitahana azy amin'i Don Miguel. Ny robbins dia tsy namoaka velively ny hadalana sy hadalana toy izany.
Msx Tsy nilaza aho hoe afaka 100% na 0% i Gentoo. Nilaza aho fa tsy nanantona ny GNU velively izy ireo ary tsy nanasaraka ny trano fitahirizana. Pragmatika izy ireo ary manandrana mampiditra ny rindrambaiko mety aminy. Ka tsy misy dikany ny famoronana resabe amin'ny fahalalahana, fahalalahana fampiasana na fitsikerana na fiderana ireo namorona azy, satria tsy mitady hamorona politika, manifesto na filozofia izy ireo. Rindrambaiko ihany
Raha ny marina dia misy foana ny fanapahan-kevitra miaraka amin'ny atiny filozofika rehefa manamboatra distro sy amin'ny raharaha DR dia voamarika tsara ny toerana misy azy ireo: ny rindranasa izay ho vokarin'izy ireo dia _savitry ny 100% -naraka ny GNU maimaim-poana, na izany aza tsy feran'izy ireo mihitsy ny mpampiasa azy ireo Tsy mila mampiasa afa-tsy ny SF Libre, izy ireo koa dia mampiditra rindrambaiko an'ny antoko fahatelo izay heverin'ireo mpampiasa azy fa ilaina.
Ary eny, nisy manifesto iray rehefa namorona Gentoo (Funtoo fa teraka ho toy ny tetik'asa biby), raha toa ianao ka manana olana amin'ny fitsidihana ny tranokala distro ary manao potsitra roa dia azonao atao ny mamaky azy.
Inona no mania ananan'i Maqueros miaraka amin'ny rafitr'izy ireo izay miasa tsara foana ary amin'ny fotoana voalohany, ahoana no tsy hiasa amin'ny fakan-tsary voafetra ananany?
Ary koa, amin'ny vola andoavan'ny iMac vola anao dia mividy tilikambo ianao izay na dia ny NASA aza, izay nohamarinin'izy ireo amin'ny OS X.
PS: Manoratra avy any am-pianarana aho, izany no antony ampiasako ny windows xD
Amin'ny ultrabooks, ny zava-misy dia betsaka kokoa, eo anelanelan'ny rivotra macbook sy ny mpifaninana aminy. Miaraka amin'ny macmini, ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny dia tsy lehibe ihany koa, ahoana raha toa ka sarobidy loatra izy ireo dia ny pro sy ny imac.
Eny, ny marina dia tsy nijery ny vidin'ny macmini aho, fa ny an'ny iMac aza maniratsira mihitsy, saingy heveriko, hajaiko izay mampiasa Mac, malalaka ny rehetra mampiasa ny OS tadiaviny.
Tsy misy dikany, mampiasa Windows aho noho ny antony OFFICE, miampy .net ho an'ny oniversite ary mampiasa Linux virtoaly aho. Ka tsy misy tantara an-tsehatra .. Mora ..
Ralehilahy, tsy voatery ho mpankafy koa ianao. De Icaza dia manana ny zony rehetra eto amin'izao tontolo izao haneho ny heviny, ary tsy hoe tsy ampy izy noho ny antony iray: Mafy toy ny an'i Nacho Vidal ny Linux, fa ny fampiharana sary sy ny tontolon'ny birao (indrindra ireo lehibe roa -ay, Plasma , Rahoviana no afaka iray volana nefa tsy misy ny singa ampiasainareo… -) Hira hafa ry zareo. Ary momba ny sombintsombiny ... Azo antoka fa raha vitsy kokoa ny diso sy ny tetik'asa ho an'ny programa izay manao zavatra mitovy ary ny olona sasany niara-nivory mba hanao tetikasa lehibe, mahomby ary mafy orina, dia hanana programa tsara kokoa isika. Mitandrema, manaja olona na dia tsy be herim-po akory aza, ary tsy tokony hihoatra ny tokony hataontsika, ohatra, ny efitrano PIM na mpitety tranonkala tokana ho an'ny tontolon'ny Linux iray manontolo, saingy mampijaly indraindray ny mahita ny fiantombohany , ny iray hafa, ilay tetik'asa ary ny iray any ankoatranao, ianao manandrana ny efatra ary tsy tsara daholo koa ny zava-drehetra tokony hatao tsara, manaiky fa tsy misy ilay rindrambaiko tonga lafatra. Firy ny mpanamory ny KDE / QT, 4, 5? Firy no miasa tsara, tsy misy? Tsy tokony hidina hiara-miasa amin'ireo olona sasany avy amin'ny tetikasa hafa ve ireo olona avy any Rekonq, Konqueror, Qupzilla, Arora, sns, mba hanao browser maoderina sy marim-pototra izay maneho tsara ireo pejy ary tsy manana asa tsy misy dikany. hanary ve ny mpitety tranonkala?
Fantatro fa tena mahafinaritra ny miara-miasa amin'ny Mac. Marina fa mandeha tsara ny zava-drehetra ary amin'ny fomba milamina sy mailaka, tsy misy zavatra mandeha tsara ny zava-drehetra ary 3 volana taty aoriana dia nisy zavatra namboarina, satria indrisy mitranga imbetsaka noho ny tokony ao anaty rindranasa birao ho an'ny Linux (nisy nahavita niara-niasa tamin'i Akonadi nandritra ny 3 volana mahery nefa tsy very mailaka na naoty?), ary azo antoka fa tsy misy na inona na inona an-tsipika manaparitaka ny efijery, satria indraindray mitranga amin'ny tontolo iainana ho an'ny varavarankely X na ireo fifanakalozan-kevitra ireo. boaty izay mivoaka amin'ny sakan'ny efijery satria nisy nieritreritra fa ratsy ny manamboatra ny lahatsoratra amin'ny andalana maromaro mba hanana boaty fifanakalozan-kevitra tsy mihoatra ny 400 na 500 metatra.
Marina ihany koa fa tsy manova rafitra malalaka sy malefaka toa ny Gentoo -ko aho ho an'ny MacOS, fa an'i Kaisara izay an'i Kaisara: Mac OS no maodely arahiny amin'ny fitoniana, fahombiazana ary asa tsara amin'ny antsipiriany ; ny asa tsara izay amin'ny farany dia mitondra fahasamihafana betsaka.
Raha ny fanazavana, misy olona manonona an'i Linus, etsy ambony. Fantatra tsara fa i Macus koa dia tia Mac (izay tsy mitovy amin'ny itiavany an'i Apple, ny fiasan'ny masinin'izy ireo ihany).
Tsy tokony hanakatona ny tenantsika amin'ny fianarana amin'ny hafa izay tsara kokoa noho ny iray amin'ny zavatra sasany isika, ary mampiditra izany fahalavorariana amin'ny zavatra tsy mivoaka tsara ho antsika izany. Ny "mpamorona" rehetra dia avy amin'ny aingam-panahin'ny hafa, na iza izy na iza; ary izany aingam-panahy izany dia hahatonga an'i Linux sy ny EEs (izay, araka ny efa nolazaiko hatrany, fa izay no tena mandringa, Linux ary ireo faritra GNU tsy mitraka akory) dia vao mainka tsara kokoa.
Heveriko fa ny mpankafy tsy misy saina dia hanendrika ahy ho fanehoan-kevitra mifanohitra amin'izany, saingy hoy izy, hoy i Einstein: "Tsy misy afa-tsy zavatra roa tsy manam-petra: izao rehetra izao sy ny hadalan'olombelona. Ary ny voalohany dia tsy azoko antoka. xD
Azafady, miala tsiny amin'ireo tsindry bokotra ("nokapohina izy ireo" Fa maninona aho! Avelao aho hanitsaka an'iza?, XDD); mazava ho azy fa tsy izaho no mpanao typist tsara indrindra eran'izao tontolo izao ...: - /
Ry zazalahy, andao tsy handany fotoana miaraka amin'ny jetón mahantra toa an'i icaza, raha toa ka nanjaitra zavatra tsara ho azy izy, fa ny zavatra nosoratany farany dia mampiseho fotsiny ny fiovan'ny adalany. Inona no nividianako mac? Pod tsara no nividianako vit niaraka tamin'i canaima ary tsara fitondran-tena izany ary mandroso zazalahy kilalao
Mitehaka, mitehaka, mitehaka.
Nozaraiko ny teninao elav. Elaela very lalana io zazalahy io.
Tsy afaka nifanaraka bebe kokoa tamin'i Elav sy ny heviny momba an'i mr aho. Icaza. Efa nolazaiko tao amin'ny MuyLinux, samy mameno ny vavan'ny "fahalalahana" ary avy eo mivarotra izany amin'ny mpandoa avo indrindra ...
raha ny marina dia tsy misy famaritana hafa io: Hypocrite. Izy dia iray hafa izay nanararaotra ny tombotsoan'ny rindrambaiko maimaimpoana mandra-pahatongany tsy 'mahazo tombony' intsony, iray hafa tsy kilasy izay nanonofinofy indray andro any ho lasa mpikambana malaza ao amin'ny oligarkia. Icaza no Pío Moa misy rindrambaiko maimaimpoana (ho an'ireo izay tsy mahalala an'i Pío Moa, ity misy andinin-teny fohy dia fohy http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_Moa).
Soa ihany fa tsy miampita mifanatrika amin'i Miguel De Icaza i ELAV.
Satria any raha azo antoka fa hisy RINGO mandritra ny fotoana kelikely.
ELAV vs De ICAZA… ..De ICAZA vs ELAV.
Tsy te haka sary an-tsaina izay hiafaran'ny MAC an'ny Icaza aho, manana ny valiny i ELAV.
Maharikoriko i Miguel D
Namaky ... fanehoan-kevitra marobe ... ary fialantsiny ary fanozonana ... fa hahahaaj ... jereo avy amin'io fijeriko io fa VOKATRY NY GNOME ... Manana 5 taona amin'ny LINUX IHANY aho ... Ary isaky ny volana dia mametraka linux bebe kokoa amin'ny masinin'ireo mpampiasa HAPPY aho .. eny..Y NY FIAINANAO TOA IZAO dia toy ny fiofanana, indraindray miakatra ny sasany ary misy kosa mandeha, misy ny manaraka be anay ary ny sasany vetivety fotsiny… RAHA NY MONKEY SY NY RAY RAY .. mahafatifaty tsara .. arahabaina ary izay mijanona, tsara tarehy kokoa. tsy maintsy hijalianao tsy amin'antony izy. Na ny fanambaranao na tsia, ity lehilahy ity dia nandray anjara betsaka tamin'ny hetsika SOFTWARE MAIMAIMPOANA, ary amin'izany dia afaka manonona izany isika na afaka miaro azy io. HATRANY NY FANTATRAO fa tsy asa hametrahana izany dia niara-niasa tamin'ny MAC aho ary tena kanto, saingy tsy nandany ny fahadimy tamin'ny MAC aho, niasa tamin'ny WINDOWS ... ary manana antony tsy hitadiavana izany aho, I te-handresy lahatra ny olona hiova ary mbola matahotra izy ireo .. hehehe fa ny zavatra roa tonta dia mitovy amiko ary na iza na iza mangataka fanampiana amiko hampiasa distro dia tiako foana ... amin'ny maha mpampiasa mandroso sy mpandahatra fandaharana tiako ny LINUX be dia be ary NA RAHA MATY IREO MPANORATRA SA IZAO LINO MIORA AZY dia hanova ahy ho WINDOWS dia handresy lahatra, ary tsy hiteny hoe TRAITOR na Mpandainga aho… LINUX dia mampianatra zavatra hafa mihoatra ny hanomezana fahafaham-po ny DESKTOP anao mba tsy hamelana anao hanana fomba tokana. MATAHOTRA NY ZARAZARA .. hehehee misy ny hareny .. fa tsy misy fari-pitsipika hanara-penitra ny antsasak'izao tontolo izao ... anontanio tsara an'i ANDROID ny momba ny fomba fahandro hehehehe ... RY ZAZA, ZAZA SY DIVERSE ... mihodina ... . misy zavatra mamokatra an'arivony azo araraotina ary na iza na iza te-ho aleha amin'izay tiany…. FAMERENANA MARO INDRINDRA ATAON'NY MPANAO POLITIKA amin'ireo fiarahamonin'izao tontolo izao sy ireo olona ireo raha toa ka mijaly isika, dia mbola matotra kokoa ireo. Andao hitadidy tsara ny olona nandalo ny fiainantsika .. jejjjeeeejeee ...
Miguel de Icaza: Misaotra anao noho izay nataonao taloha ho an'ny Linux, ankehitriny fa mihatsara ianao.
"Ny fanajana ny zon'ny hafa dia fihavanana." Benito Juarez
Mitsoka izy ary PE LO TU DO koa!
Tompon'andraikitra izy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy misy ilana azy IZY ary tsy nahay nanao ny asany.
Ny mpanorina ny tenany dia mahafoy ny zavatra noforoniny manokana, miaraka amina fihetsika toy ireny, dia vao mainka tsy te hampiasa GNOME ianao ...
TRAITOR, TRAITOR, TRAITOR !!! NA INDRINDRA NY ZAVATRA REHETRA MBOLA MBOLA MAMPIASA NY GNOME 2 anao taloha.
TRAITOR !!! rindrambaiko maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana, maimaimpoana mandrakizay ho an'ny rehetra ny GNU / Linux !!!
Ramos dia hoy izy:
Mampihomehy ny mamaky fanehoan-kevitra marobe avy amin'ny olona, ​​izay tsy mahalala izay lazain'ny rindrambaiko maimaimpoana mitsikera olona iray izay nandray anjara betsaka. Azo antoka fa ny ankamaroany dia olona nanomboka nampiasa kinova Linux mba hahitana "tsara" kokoa.
Miguesl, tamin'izany fotoana izany, nanolotra ny maro taminay ny hany fanoloana ny Windows ary noho izany dia nanome anay ny fahafahany mitrandraka kely amin'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Ny mpanoratra ny lahatsoratra dia afaka mitsikera ny toerana misy azy, miantso azy izay tiany ary mahatsiaro ho maharikoriko azy tanteraka. Fa azo antoka fa ny fandraisan'anjaran'ny mpanoratra indrindra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia ny fananana bilaogy antsoina hoe "FromLinux". Ary ny nahitany loza dia an'arivony ny bilaogy toa an'ity, ka tsy misy fanantenana intsony fa hamaky azy i Miguel ary hamoaka hevitra.
Mamaly an'i Ramos
Tena matotra ve? Ny hany solony amin'ny Windows? Eny, tamin'ny fotoana nivoahan'ny GNOME (3 martsa 1999) dia efa nisy ny KDE (12 Jolay 1998).
Saingy hatramin'ny nanampianao ilay lohahevitra ... Tsy nandray anjara tamin'ity bilaogy ity fotsiny aho, ary tsy dia zava-dehibe amiko ny famakian'i Miguel de Icaza ahy, satria tsy ho an'ny mpampiasa toa azy ity toerana ity.
Ary ankehitriny isika dia: Izaho dia iray tamin'ireo mpisava lalana sy mpitantana ny The Migration to Free Software ao anatin'ny MINED, nanampy ny institiota niasako ho ivom-panabeazana voalohany ao amin'ny firenena izay mampiasa rindrambaiko Maimaimpoana 100%, na amin'ny PC na amin'ny Drafitra fandalinana. Ho fanampin'izay, nanome torohevitra tamin'ny andrimpanjakana hafa aho.
Mpikambana sy mpandrindra ny Free Technologies Users Group in Cuba (GUTL) aho, izay nandraisako anjara tamin'ny fanaparitahana, fampiroboroboana ary fampiharana ny lozisialy malalaka sy loharano misokatra amin'ny toerana maro ao anatin'izany ny ivon-toerana. Ao anatin'ireto hetsika ireto dia nandamina hetsika lehibe maromaro toa ny FLISOL aho.
Ary nandray anjara tamin'ny fomba maro hafa aho mba mety tsy hisy dikany ho anao, fa tsy ho an'ny hafa. Raha izao, raha mieritreritra ianao fa ny "fandraisana anjara" dia "fandaharana" fotsiny na "fanatsarana" ny rindranasa ... diso ianao.
bolbo dia hoy izy:
Inona no bitika noraisinao tamin'ilay rangahy, avelao izy irery raha tsy te hampiasa linux amin'ny fiainany andavanadro izy, marina ny lazainy fa tsy nojerena ilay developer rindrambaiko matihanina ary naharitra ela ny fanamorana ny mandeha ho azy fanekena ny fitaovana. S dia nanoro hevitra tamin'ny vaovao sasany fa nolavin'i Icaza ny Linux ary tsy izany no zava-misy amin'ny matihanina, heveriko fa nahatratra ny hatezerana izy fa ny Linux dia tsy nandray am-pahamatorana tena mba hisarihana ireo mpamorona lozisialy.
Mamaly an'i bolbo
Icaza dia nahavita zavatra betsaka kokoa ho an'ny Linux noho ireo rehetra maneho hevitra eto.
Azonao atao ny manao ny borikinao amin'izay tianao. Hoy aho.
Ny marina izao raha hitanao ny maha-mahatsikaiky an'i Icaza, miandry fotoana fotsiny aho handehanana miaraka amin'ny fahalalana rehetra mankany amin'ny mpanolotra ambony indrindra, dia nanao izany foana izy. Halatra ny fahalalan'ny hafa
Maniry anao aho hamoha ny panorama anao amin'ireo rafitra misy ankehitriny, ary minoa ahy raha manohy manaparitaka ny linux dia hihena izany.
Juan Gomez dia hoy izy:
Izay nolazain'i Miguel dia mpanjaka tsy misy saina, mora kokoa ny miaiky fa vola no anaovany azy. .. aza minono .. raha nandany ny androm-piainany izy nijery izay ataon'ny orinasa hafa hangalarana azy aminy injeniera miverin-dàlana… vola izany, Icaza mpivaro-tena… mifampivarotra daholo isika, nefa lafo be i Miguel mpivaro-tena… ary manana trosa izy satria mahay ilay lehilahy .. tsotra kokoa ny milaza fa te hahazo vola an-jatony tapitrisa .. tsy misy maharatsy azy….
Mamaly an'i juan gomez
jrbp1972 dia hoy izy:
ny mac dia fako be loatra nefa anontanio ilay macbook maharikoriko fa nendasako tao anaty kitapom-bolako, mamporisika anao aho mba tsy hisy hividy ny iray amin'ireo banga ireo, Linux no safidy tsara indrindra ho an'ny rehetra.
Mamaly an'i jrbp1972
Nampiasa Linux nandritra ny 5 taona mahery aho. Izaho manokana dia tsy manam-pahaizana momba ny solosaina, fa ity fitsidihana rindrambaiko maimaimpoana ity dia nampianatra ahy kely momba ireo zavatra ireo. Na eo aza ny zavatra niainako kely (ary nanandrana ny Fedora, Ubuntu, Elementary, Mint, Debian ary Antergos) dia tsy azoko izay lazain'i Icaza. Tsy manana olana amin'ny WIFI aho, mainka izany amin'ny audio; Afaka mampiato tsy misy olana aho. Mino tanteraka aho fa namadika ny idealy Andriamatoa Icaza.
Navoaka ny Magazine GIMP kinova faha-3